Kaabista Da'da ee ugu Fiican: Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Bogga ugu weyn > Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Kadib daraasad 2019-ka ah oo la soo gabagabeeyay Nikotinamide Mononucleotide waa badbaado u leedahay cunnida aadanaha haddii isticmaalkeedu ku xaddidan yahay xadka loo qoray, dhowr shirkado wax soo saar ayaa suuqa la soo galay waxyaabaha ay bixiyaan. Xulashada xad dhaafka ah ee xulashadu waxay ka dhigtay kuwa wax iibsadaa inay ku wareerto midkee Nictonimade Mononucleotide (NMN) dheeri ah iyaga ayaa ugu fiican. Fikradeena, waxa ugu wanaagsan ee ka hortagga gabowga Nicotinamide Mononucleotide (NMN) sanadka 2021 waa shirkadda Cofttek.
Cofttek waa shirkad lagu qiimeeyo A + oo suuqa ku jirtay ku dhowaad 12 sano waxayna sameysay saldhig raacsan oo daacad ah inta lagu jiro waqtigan. Budada NMN ee ay bixiso shirkadu waa seddex laab shaybaar la tijaabiyey, NMN-dawooyinka daawada laga helo isla shirkadihii keenay NMN ee tijaabooyinka caafimaad ee bini'aadamka ee muhiimka ah ee dhacay sanadihii la soo dhaafay. The Budada NMN ay soo saartey Cofttek waxay fududeeysaa u nuugista jirka si sahlan, taas oo kordhineysa jiritaanka noolaha sheyga iyo sidoo kale howlihiisa jir ahaaneed. Waxaa taas ka sii muhiimsan, budadan waxay ku imaaneysaa tiro badan oo waad kaydin kartaa seddex bilood. Isku soo wada duuboo, tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa oo leh qiimeyn adeegsade heer sare ah waxayna ka timaadaa shirkad soo saartay badeecado la isku halleyn karo oo wax ku ool ah sannadba sannadka ka dambeeya.
Waa maxay Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Nmn muxuu ku fiican yahay?
Nmn ma ka noqon karaa gabowga?
Sideed u kordhisaa Nmn si dabiici ah?
Nmn ma kordhin karaa cimri dherer?
Intee in le'eg ayuu Nmn ku sii jiraa nidaamkaaga?
Maxaa dhacaya markaad joojiso qaadashada Nmn?
Nmn ma kaa dhigaysaa qof ka yar?
Waa maxay kaabista ugu fiican ee maqaarka gaboobaya?
Sideen ugu laaban karaa laalaabku si dabiici ah?
Sideen ugu rogi karaa maqaarka gaboobaya?
Muxuu ku talinayaa Sinclair?
Nmn ma leedahay waxyeelo?
Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca resveratrol?
Nicotinamide ma ammaanbaa in la qaato maalin kasta?
Maxay NADH aad u badani u xun tahay?
Kee baa fiican Nmn ama NR?
Waa maxay kaabista Nmn ee ugu fiican?
Nmn miyuu rogaa gabowga?
Intee in leeg ayaad qaadanaysaa NMN?
Nmn ma la mid yahay b3?
Cuntee noocee ah tan ugu sareysa ee NAD +?
Nmn miyuu sababa biyo-baxa?
Xagee ka iibsan karaa Nmn Kanada?
Nmn ma nabad qabaa?
Kee baa fiican NAD ama NMN?
Sideen ku kordhin karaa NAD + si dabiici ah?
Maxaan la imaadaa NMN?
Miyaan qaataa TMG oo leh NMN?
Nmn ma niacinbaa?
Miyuu nicotinamide riboside ka hooseeyaa BP?
Halkee laga helaa betaine?
Cunnooyinkee baa joojiya laalaabka?
Sideen 10 sano uga sii da 'yar karaa?
Sideen wajigayga uga joojin karaa gabow?
Cunnadee ayaa kaa dhigeysa inaad dhaqso u duqowdo?
Faytamiin noocee ah ayaa ku wanaagsan laalaabidda wajiga?
Maxaan Ugu Baahanahay Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Isticmaalka Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Xagee laga iibsadaa Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Powder in Bulk?
Nicotinamide Mononucleotide (1094-61-7) ama NMN waa nucleotide si dabiici ah uga dhex jirta inta badan cuntooyinka aan cunno. Waxaa laga helaa avokado, broccoli, qajaar, kaabajka, edamame, iyo yaanyada. Si kastaba ha noqotee, tirada NMN ee ay bixiyaan cuntooyinkan kuma filna inay joogteeyaan shaqooyinka muhiimka ah ee jirka sidaas awgeed, dadka waxaa badanaa lagula taliyaa inay qaataan nafaqada NMN. Laakiin, maxay NMN muhiim ugu tahay jirka?
Nicotinamide Mononucleotide ama NMN waa horudhac Nicotinamide Adenine Dinucleotide ama NAD +. Erayada fudud, NMN waa isku-darka u beddelaya NAD + iyada oo loo marayo taxaddarro falgal kiimiko ah oo ka dhaca gudaha unugyada. NAD +, dhanka kale, waxaa loo arkaa inay muhiim u tahay jirka maadaama ay qabato howlo dhowr ah oo muhiim ah, oo ay kujirto isku dheelitirka laxanka wareega jirka, kala jabinta nafaqooyinka si loo sii daayo tamarta gacanta, iyo fududeynta falcelinta muhiimka ah ee enzymatic, oo qaarkood dib u dhiga gabowga. Nasiib darrose, in kasta oo NAD + laga dhex helo unug kasta oo jidhka ka mid ah, haddana wax soo saarkiisu wuu yaraanayaa da'da. Waxaa taas ka sii muhiimsan, ma jiraan cunooyin uu qofku cuni karo si loo kordhiyo wax soo saarka NAD + jirka gudihiisa. Waa, sidaas darteed, in jidhku u baahan yahay NAD + horudhac ah oo isu beddelaya NAD + gudaha unugga, taas oo markaa isku dheelitiraysa hoos u dhac ku yimaadda jirka. Tani waa halka isticmaalka kaabista NMN uu ciyaaro.
NMN waxaa lagu ogaadey inay wanaajineyso waxqabadka insulin iyo wax soo saar, taasoo dhalisay faa'iidooyin dheef-shiid kiimikaad dheeri ah iyo sidoo kale dulqaadka gulukooska. Gaar ahaan, kaabisyada NMN ayaa kaa caawin kara shaqada si loo yareeyo xaaladaha dheef-shiid kiimikaadka sida sonkorowga, cudurka beerka dufanka badan, iyo cayilka.
Maamulka nicotinamide mononucleotide (NMN) Kaabista nototinamide mononucleotide (NMN) waxay dhiirrigelisaa astaanta muujinta miRNA ee jiritaanka jiirka da'da ah, saadaalinta dib-u-kicinta epigenetic iyo saameynta anti-atherogenic.
NMN si badbaado leh ayaa loo siin karaa jiirka waxaana si dabiici ah looga helaa dhowr cunno, oo ay ku jiraan broccoli, kaabaj, qajaar, edamame iyo avokado. Daraasadda cusubi waxay muujineysaa in marka NMN lagu milo biyaha la cabbo oo jiirka loo dhiibo, waxay ka muuqaneysaa qulqulka dhiigga wax ka yar seddex daqiiqo.
Saynisyahannadu waxay barteen laba dhexdhexaadiye oo kale ah, nicotinamide riboside (NR) iyo nicotinamide mononucleotide (NMN), oo aad uga ballaadhan kuwa kale, cilmi-baaristuna waa dhiirrigelin. Daraasado dhowr ah ayaa tilmaamaya in kaabayaashaas horudhaca ah ay kordhin karaan heerarka NAD + isla markaana ay dheereyn karaan cimriga khamriga, dixirigyada, iyo jiirka.
Daraasaddeena xaadirka ah waxay si cad u muujineysaa in NMN si dhakhso leh looga soo nuugo mindhicirka wareega wareegga dhiigga 2-3 min iyo sidoo kale laga nadiifiyo wareegga dhiigga ee unugyada 15 min.
Resveratol iyo NMN labaduba waxay ku shaqeeyaan adoo hagaajinaya awooda unugyada jirkaaga inay is hagaajiyaan. Marka, haddii aad iyaga xoogaa qaadatid ka dibna aad joojiso kuuma sababayso inaad isla markiiba ku laabato gobolkii aad ku jirtay intaadan qaadan ka hor maxaa yeelay isbeddellada ayaa ah horumarin dhab ah oo ku saabsan shaqada unugyada.
"Shaybaarkayagu wuxuu muujiyey in siinta NMN jiirarka in ka badan 12 bilood ay muujineyso saameyn kahortagga gabowga." Sida laga soo xigtay Imai, tarjumaadda natiijooyinka bini-aadamka waxay muujineysaa in NMN ay siin karto qof qaba dheef-shiid kiimikaad 10 ilaa 20 sano ka yar.
12ka Kaabash ee ugu Fiican Da'da
Nicotinamide riboside iyo nicotinamide mononucleotide
Xaddid qaadashada sonkorta
Isticmaal saliidda qumbaha.
Qaado beta carotene.
Cab shaah caleen liin dhaymo ah.
Beddel booska hurdada.
Iska ilaali iftiinka ultraviolet
Si looga caawiyo bukaanadooda inay ka hortagaan gabowga maqaarka oo dhicis ah, dhakhaatiirta maqaarka waxay bukaankooda u fidiyaan talooyinka soo socda.
Ka ilaali maqaarkaaga qorraxda maalin kasta.
Codso is-meeldheeri halkii aad ka heli lahayd hargab.
Haddii aad sigaar cabto, jooji.
Ka fogow muujinta wajiga oo soo noqnoqda.
Cun cunto caafimaad leh, oo isku dheelitiran.
Cab aalkolo yar.
Jimicsi samee maalmaha ugu badan ee usbuuca.
Si tartiib ah u nadiifi maqaarkaaga.
Maydh wejigaaga laba jeer maalintii iyo dhidid badan ka dib.
Jooji isticmaalka alaabada daryeelka maqaarka ee wax uraya ama gubaysa.
David Sinclair wuxuu qaataa:
Resveratrol - 1g / maalin kasta - subaxyo ciir ah (eeg meesha laga iibsado) Nicotinamide Mononucleotide (NMN) - 1g / maalinba - subaxdii (eeg meesha laga iibsado) Metformin (daawada laguu qoro) - 1g / maalin walba - 0.5g subaxdii & 0.5g habeenkii - marka laga reebo maalmaha la jimicsado.
Marka afka lagaa qaado: Nicotinamide riboside waa POSSIBLY SAFE marka la isticmaalo muddo-gaaban. Dhibaatooyinka soo raaca ee loo yaqaan 'nicotinamide riboside' ayaa badanaa khafiif ah. Dhibaatooyinka soo raaca waxaa ka mid noqon kara dhibaatooyinka caloosha sida lallabbo iyo dibbiro ama dhibaatooyinka maqaarka sida cuncun iyo dhidid badan.
Marka afka lagaa qaado: Resveratrol waa KHILAAF SAFE marka loo isticmaalo qadarka laga helo cuntooyinka. Marka lagu qaato qiyaaso ilaa 1500 mg maalin kasta ilaa 3 bilood, resveratrol waa SAMAYNTA SAFE. Qiyaaso ka sareeya ilaa 2000-3000 mg maalintii ayaa si ammaan ah loo isticmaalay 2-6 bilood. Si kastaba ha noqotee, qiyaasahan sare ee resveratrol waxay u badan tahay inay sababaan dhibaatooyin caloosha.
Daawada 'Nicotinamide riboside' waxay u badan tahay inay ku badbaado waxyeellooyin yar - haddii ay jiraan - Daraasaadka aadanaha, qaadashada 1,000-2,000 mg maalintiiba wax saameyn ah kuma yeelan. Si kastaba ha noqotee, daraasadaha badankood ee bini'aadamka ayaa ah kuwo muddo gaaban ah oo ka-qaybgalayaashu aad u yar yihiin Wixii fikrad sax ah oo ku saabsan nabadgelyadeeda, daraasadaha aadanaha ee adag ayaa loo baahan yahay.
NADH-kan xad-dhaafka ahi wuxuu jebin karaa isku-dheelitirnaan la'aanta u dhexeysa NADH iyo NAD +, ugu dambayntiina wuxuu u horseedi karaa diiqad oksaydh ah iyo noocyo kala duwan oo dheef-shiid kiimikaad ah.
NR waxaa badanaa loo arkaa inay tahay horudhac heer sare ah oo wax ku ool ah oo loo yaqaan 'NAD +,' laakiin ina adeerkeed molecule NMN, inkasta oo uusan ahayn qayb ka mid ah aasaaska 'Basis', wuxuu kor u qaadayaa sunnayaasha sida cunugga cusub ee dhismaha.
NMN way ka fudud tahay NR, taasoo macnaheedu yahay inay badanaa u baahan tahay in la jajabiyo si ay ugu haboonaato qolka. NR, marka la barbardhigo horudhacayaasha kale ee NAD + (sida nicotinic acid ama nicotinamide) waxay ugu sarreysaa wax ku oolnimada. Laakiin sii NMN albaab cusub, mid ka mid ah oo ay ka soo geli karto, waana ciyaar cusub oo cusub.
Nmn dheeri ah ayaa ugu fiican?
NMN Kiniiniyada Sublingual.
NAD + Dahabka Dahabka ee NMN.
Siyaabaha lagu qasbo kordhinta heerarka NAD + ayaa la muujiyey si loo wanaajiyo shaqada mitochondrial ee xayawaanka duugga ah, iyadoo dib looga noqonayo qaar ka mid ah khasaarihii ku dhacay da'da. Maamulka nicotinamide mononucleotide (NMN) ayaa la muujiyey si loo yareeyo cilladaha gabowga la xiriira.
In kasta oo daraasaduhu ay caddeeyeen in Nicotinamide Mononucleotide ama NMN ay ammaan u tahay isticmaalka aadanaha, cilmi baaris ayaa wali la wadaa si loo ogaado qiyaasta ugu waxtarka badan iyo inta jeer ee qiyaasta NMN ee dadka. Si kastaba ha noqotee, daraasado la sameeyay illaa iyo hadda waxay caddeeyeen in qiyaasta illaa 500 mg maalintii ay ammaan u tahay ragga. Maalmahan, Nicotinamide Mononucleotide waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan kaniiniyada iyo budada. Qeybiyeyaasha dheeri ee NMN waxay sheeganayaan in kaabisyada afka laga qaato ay wax ku ool u yihiin kobcinta wax soo saarka NAD + ee jirka. Sheegashooyinkani waxay ku saleysan yihiin xaqiiqda ah in Slc12a8, oo ah xamuul nicotinamide nucleotide ah, uu ka caawiyo nuugista NMN ee mindhicirka.
NMN maahan. NMN ma aha nooc ka mid ah fiitamiin B3, mana jiraan tijaabooyin caafimaad si loo caddeeyo inay kordhiso NAD-da dadka. NMN sidoo kale ma aha nooca molekule ee waligiis loo tixgelin doono inuu yahay fiitamiin maadaama ay ku jirto fosfate, taas oo saameyn ku yeelata awooddeeda inay unugyada gasho.
Cunnooyinka Kordhiya Heerarka NAD
Waxaa jira cuntooyin cayiman oo kobcin kara heerarka NAD ee jirka. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah:
Caanaha Caanaha - cilmi baaris ayaa muujisay in caanaha lo'du ay yihiin isha wanaagsan ee Riboside Nicotinamide (RN). Litir caano lo 'ah oo cusub ayaa ka kooban qiyaastii 3.9µmol oo ah NAD +. Marka intaad ku raaxeysaneyso koob caano qabow, runti waad sii da 'yaraaneysaa oo caafimaad qabtaa!
Kalluunka - waa tan sabab kale oo aad ugu raaxeysan karto kalluunka! Qaar ka mid ah kalluunka sida tuna, salmon iyo sardines ayaa ah ilo hodanka ah ee NAD + ee jirka.
Mushrooms - dad badan ayaa jecel boqoshaada waxayna iyaga u yihiin cunno joogto ah cunnadooda caadiga ah. Laakiin ma ogtahay in boqoshaada, gaar ahaan likaha dambiyada, ay sidoo kale gacan ka geysato sidii si dabiici ah kor loogu qaadi lahaa heerarka NAD? Haa, waa run. Marka, ku raaxee cunitaanka boqoshaada oo sii wad muuqaalkaaga oo aad u yartahay oo aad dhallinyar tahay!
Khamiirka - khamiirka waa walax loo isticmaalo sameynta rootiga iyo waxyaabaha kale ee rootiga lagu sameeyo. Khamiirku wuxuu ka kooban yahay Riboside Nicotinamide (RN), oo ah horudhaca NAD. Waa tan sabab kale oo aad ugu raaxeysan karto waxyaabaha aad ku jeceshahay ama rootida aad ku raaxeysato mar kasta oo aad soo booqato keega! Ku raaxayso cuntada aad ugu jeceshahay adiga oo kor u qaadaya heerarka NAD isla waqtigaas. Sidee qabow waa taas!
Khudaarta cagaaran - khudradda cagaaran waxay ka kooban yihiin dhammaan noocyada nafaqooyinka iyaga ku jira oo siyaabo kala duwan waxtar ugu leh. Dhawaan, waxaa soo ifbaxay in khudradda cagaaran ay sidoo kale tahay isha wanaagsan ee NAD ee jirka. Qaar ka mid ah khudaartaas waxaa ka mid ah digir iyo asparagus.
Midhaha oo dhan - sidii hore looga wada hadlay, Vitamin B3 sidoo kale waxaa ku jira RN, oo ah Hordhaca NAD. Si kastaba ha noqotee, khudaarta, waxyaabaha cuntada ama miraha la kariyo ama la warshadeeyo, waxay waayaan nafaqadooda iyo sidoo kale fiitamiinka. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad sidoo kale cuntid khudaarta ceyriinka ah aadna qaadatid miraha isku dhan halkii aad kaheli laheyd cuntooyinka warshadaysan.
Iska yaree cabitaanka khamriga - NAD ayaa mas'uul ka ah dayactirka guud ee howlaha dheef-shiid kiimikaadka ee jirka. Aalkoladu waxay u egtahay inay faragaliso nidaamyadan waxayna yareyneysaa waxtarka NAD. Sidaa darteed, waa inaad iska ilaalisaa cabbitaanka xad dhaafka ah ee cabitaanka khamriga maadaama aysan sidoo kale caafimaadka u fiicnayn.
'Niacin flush' waa waxyeelo soo gaarta qaadashada qiyaaso badan oo niacin dheeri ah (Vitamin B3). Biyo-baxa wuxuu dhacaa marka niacin uu sababo qanjidhada yar-yar ee maqaarkaaga inay fidaan, taasoo kordhinaysa qulqulka dhiigga ee dusha maqaarka. Si ka duwan fiitamiin B3 (niacin), nicotinamide riboside waa inaysan keenin wajiga oo la isku nadiifiyo.
NMN waa nucleotide laga soo qaatay ribose iyo nicotinamide. Sida nicotinamide riboside (Niagen), NMN waa nooc ka mid ah niacin, waxayna u tahay horudhac NAD +. NMN Kanada: Nicotinamide mononucleotide hadda lama heli karo iib ahaan ahaan kaabis cunto ahaan Kanada.
Sanadihii la soo dhaafay, dhowr daraasadood ayaa la sameeyay si loo barto in isticmaalka NMN ee bini'aadamka uu badbaado yahay iyo in kale. Daraasadahaani waxay leeyihiin, waqti iyo mar kale, waxay muujiyeen in isticmaalka Nicotinamide Mononucleotide uu gabi ahaanba badbaado yahay marka qiyaasta daawada la xadido Guud ahaan, ragga waxaa lagula talinayaa inay ku dhegaan qiyaasta maalin kasta oo ka yar 500 mg. Si kastaba ha noqotee, waa in la muujiyaa in FDA aysan wali u ansixin NMN inay tahay daroogo aamin ah. Sidaa darteed, haddii aad leedahay xasaasiyad ama arrimo caafimaad, waxaa ugu wanaagsan inaad la tashato dhakhtarkaaga ka hor intaadan bilaabin wax dheeri ah NMN.
NAD iyo NMN waa maaddooyin dheeri ah oo ka hortagga gabowga, iyo sabab wanaagsan.
Si dabiici ah Kordhinta Heerarka NAD
Nicotinamide Riboside Cuntada dheeriga ah
Cadceedda Aad U Badan Ma Fiicnaan Karto!
Si aad u hagaajiso heerarkaaga 'NAD +', waxaad ku qaadan kartaa kaabsallada NMN ee dib-u-dhigga ah ee leh Sirtuin Activator sida Resveratrol oo leh yogurt-dufan buuxa leh taasoo ka caawisa helitaanka biovevailability Resveratrol.
Haddii aad hadda qaadato NMN ama aad ka fekereyso bilaabista, tixgeli inaad ku darsato TMG oo ah taageero dheeri ah oo loogu talagalay methylation. Ku deeqayaasha kale ee methyl ee waxtar yeelan kara waxaa ka mid ah methylated B6, B12, iyo folate.
Waa maxay farqiga u dhexeeya nikotinamide iyo nicotinamide riboside? (3)
Niacin waa qaab oksijiin ah oo nikotiin ah oo jirku u rogi karo NAD. Nicotinamide waa amide niacin oo aad ugu eg NAD oo leh waxyeelo yar. Nicotinamide riboside waa qaab synthetic ee nicotinamide oo leh sifooyin kala duwan.
Sida nicotinamide riboside, NMN waa nooc ka mid ah niacin, bini aadamkuna waxay leeyihiin enzymes isticmaali kara NMN si ay u soo saaraan nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Jiirka, NMN wuxuu unugyada ka soo galaa mindhicirada yar gudahood 10 daqiiqo gudahood isagoo u wareegaya NAD + iyadoo loo marayo xamuulka Slc12a8 NMN.
Nicotinamide riboside waa mid si dabiici ah u dhacda oo nikotiinka ah adenine dinucleotide (NAD +), oo ah dhexdhexaadiye muhiim u ah saameynta faa'iidada leh ee xaddidaadda kalooriga, sidaas darteedna waa xaddidaad cusub oo kalooriye ah. Waxaan dhawaan dhameystirnay daraasadii ugu horeysay ee tijaabada ah ee ku-darista 'nicotinamide riboside supplement' ee dadka da'da dhexe iyo kuwa waaweyn ee caafimaadka qaba waxayna muujisay in toddobaadyada 6 ee kordhinta ay hoos u dhigtay cadaadiska dhiigga systolic (SBP) ee 8 mmHg ee shakhsiyaadka leh aasaasiga SBP ee 120-139 mmHg (sare u SBP / Heerka 1 hypertension) marka la barbardhigo placebo, iyo hoos udhaca qallafsanaanta halbowlaha, saadaal madaxbanaan oo xoog leh ee CVD iyo cudurro iyo geeri la xiriirta.
Betaine waxaa laga helaa noolaha, dhirta, iyo xayawaanka waana qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntooyin badan, oo ay ku jiraan qamadiga, kalluunka qolofta leh, isbinaajka, iyo xididdo sonkor ah. Betaine waa isku-darka quwernary ammonium ee loo yaqaan 'trimethylglycine', glycine betaine, lycine, iyo oxyneurine.
Halkan waxaa ah 10 ka mid ah cuntooyinka gabowga kahortaga ee jirkaaga ku nafaqeeya dhalaal ka yimaada gudaha.
Isticmaal Maaskaro Fuuqbaxa.
Xullo aasaas iftiin leh
Xaydha (laakiin Ha dhaafin)
Cad Cad Khadkaaga Biyaha
Aragtidaada ku dhammee ceebta macdanta
Ka ilaali maqaarkaaga qorraxda maalin kasta
Codso is-meeldheeri halkii aad ka heli lahayd hargab
Haddii aad sigaar cabto, jooji
Ka fogow muujinta wajiga oo soo noqnoqda
Cun cunto caafimaad leh, oo isku dheelitiran
Cab aalkolo yar
Jimicsi samee maalmaha ugu badan ee usbuuca
Si tartiib ah u nadiifi maqaarkaaga
Baradhada macaan ee shiilan ee shiilan
Rooti la kariyey rootiga cad
Malab ama miro sonkorta cad
Saliid saytuun ah ama avocados loogu talagalay margarine
Ku dhaji digaaga hilibka warshadaysan
Ka fikir laba jeer soodhada iyo kafee
Ku cab khamriga si dhexdhexaad ah
Iska ilaali inaad wax ku karsatid kuleylka badan
Kafee bariiska beddel
Ka hortag fructose leh lipoic acid
Faytamiin C sidoo kale wuxuu gacan ka geysan karaa ka hortagga astaamaha gabowga maxaa yeelay doorkiisa muhiimka ah ee isku-dhafka kolajka dabiiciga ah ee jirka. Waxay ka caawisaa sidii loo bogsiin lahaa maqaarka dhaawacmay iyo, xaaladaha qaarkood, waxay yareysaa muuqaalka duuduubka. Qaadashada fitamiin C ku filan ayaa sidoo kale kaa caawin karta hagaajinta iyo ka hortagga maqaarka qalalan.
Gabowgu waa waqti laxiriira iyo dib uqabashada howlaha jirka ee bini aadamka. In kasta oo gabowgu yahay mid lama huraan ah oo aan laga hortegi karin, haddana saynisyahannadu waxay sannado badan u hureen sidii ay u fahmi lahaayeen sida hawshani dib ugu dhici karto loona xakamayn karo. Cilmi-baaristaan ​​sii socota waxay horseedday helitaanka dhowr walxo iyo iskudhafyo leh astaamo anti-gabowga oo loo rogi karo ka-hortagga gabowga. Mid ka mid ah dhismooyinka noocan oo kale ah oo leh waxyaabo muhiim u ah da'da-gabowga oo leh saynisyahanno dareemaya xiiso waa NMN ama Nicotinamide Mononucleotide. Maqaalkani, waxaan ka wada hadalnay wax walba oo laga ogaan karo wax ku saabsan NMN iyo sidoo kale ka-hortagga gabowga ugu fiican ee nicotinamide mononucleotide ee 2022.
Ilaa dhowr sano ka hor, dhammaan daraasadaha la xiriira isticmaalka NMN waxaa lagu sameeyay xayawaanka iyadoo daraasadahaani ay muujiyeen natiijooyin rajo leh, natiijooyinkan kuma filneyn in la dhiso faa'iidooyinka isticmaalka NMN ee aadanaha. 2016, daraasad ayaa la sameeyay si loo falanqeeyo amniga isticmaalka NMN iyo waqtigiisa koorsada ee dhiigga aadanaha. Daraasadu waxay soo saartay natiijooyin rajo leh. Boosto taas, daraasad kale ayaa lagu sameeyay 2016 si loo barto saameynta isticmaalka NMN ee haweenka 50 ee waayeelka ah ee la ildaran BMI sare, gulukoosta dhiigga, iyo triglycerides dhiigga. Daraasadda ayaa ku guuleysatay. Si kastaba ha noqotee, maadaama dhulka daraasadda lagu xadiday haweenka da 'gaar ah, saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin in caddayn dheeraad ah loo baahan yahay si loo caddeeyo in isticmaalka NMN uu ammaan u yahay aadanaha.
Sidaa darteed, dhawaanahan, 2019, daraasad ayaa lagu sameeyay Qaybta Tijaabada Caafimaadka ee Dugsiga Caafimaadka ee Jaamacadda Keio. Mawduuca daraasadda ayaa ahaa 10 nin oo da'doodu u dhaxayso 40 iyo 60. Nimankan waxaa la siiyay qiyaaso u dhexeeya 100 mg ilaa 500 mg. Daraasadu waxay ku soo gabagabaysay in NMN ay si fiican u dulqaadan karaan bini'aadamka isla markaana ay badbaado u tahay isticmaalka ilaa inta isticmaalkeeda si wanaagsan loo maamulay. Daraasadani waxay ahayd mid muhiim ah maadaama ay ahayd daraasadii ugu horeysay ee NMN ee lagu sameeyo bini'aadamka si loo barto saameynta NMN ku leedahay guud ahaan caafimaadka aadanaha. Isla markii la ogaaday in isticmaalka NMN uu yahay mid badbaado leh, warshadeeyayaashu waxay bilaabeen inay suuqa ku duqeeyaan agabka dheeriga ah ee NMN, oo maalmahan noqday wax caadi ah.
Qeybtaan, waxaan ka wada hadalnay faa'iidooyinka suurtagalka ah ee ku xiran Nicotinamide Mononucleotide ama faa'iidooyinka NMN.
N NMN Waxay Gaabinaysaa Gabowga
Mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee NMN waa in ay hoos u dhigto hawsha gabowga. Dhowr sano ka hor David Sinclair, oo ku takhasusay cilmiga nafsiga Australiyaanka ahna borofisar ku takhasusay cilmiga hiddo-wadayaasha, ayaa bixiyay caddeyn ah in NAD + uu gaabiyey gabowga iyo sidoo kale bilawga cudurada da'da la xiriira ee aadanaha. Si kastaba ha noqotee, wax soo saarka NAD + wuxuu ku yaraanayaa da'da. Markaa, markay dadku sii sii jiraan, baahida loo qabo NAD + horudhac ayaa ku kordhaya jirkooda. Halkaan waa meesha NMN uu ku ciyaaro: NMN wuxuu galayaa unugyada wuxuuna mari doonaa dhowr isbadal kiimiko ah kahor intuusan noqon NAD + oo wuxuu gaabin doonaa geedi socodka la xiriira da'da.
② Dadka la ildaran cudurka macaanka waxay ka faa’iideysan karaan isticmaalkiisa
Daraasad ayaa loo sameeyay si loo daraaseeyo sida kaabista afka ee NMN ay uga caawisay cuntada iyo sonkorowga la xiriira da'da ee jiirka. Daraasadda ayaa shaaca ka qaaday in jiirarka afka laga siiyo ee NMN ee afka laga qaato ay muujisay feejignaan dheeri ah oo insulin iyo sidoo kale dheecaanka dheecaanka. Daraasadani waxay bixisay waxoogaa tilmaamaya in Nicotinamide Mononucleotide ama afka laga qaato NMN ay ka caawin karto dadka qaba cudurka macaanka.
③ Isticmaalka NMN wuxuu kaloo kuxiran yahay Caafimaadka Wadnaha oo hagaagay
Daraasad kale ayaa la sameeyay si loo daraaseeyo sida kaabista NMN ay u saameysay caafimaadka wadnaha ee jiirarka Baadhitaanka ayaa shaaca ka qaaday in NMN kaliya aysan ka weecin kaliya xididada dhiiga ee la xiriira da'da iyo burburka xasaasiga ah ee jiirarka laakiin sidoo kale ay u horseeday in dhiiga uu fiicnaado. Waxa ugu yaabka badnaa waxay ahayd xaqiiqada ah in jiirarka loo bixiyo NMN afka ah, qulqulka xididdada dhiigga ee cusub ayaa la arkay. Dhawaan, daraasad kale ayaa la sameeyay oo lagu daraaseeyay saamaynta NMN ay ku leedahay caafimaadka wadnaha jiirarka waxayna daraasadani sidoo kale shaaca ka qaaday natiijooyin la mid ah. Daraasadahaani waxay bixiyeen cadeymo ku filan cilmi baarayaasha si ay u rumeystaan ​​in isticmaalka NMN uu sidoo kale kor u qaado caafimaadka wadnaha ee aadanaha
④ Dadka qaba Cudurka Alzheimers ayaa ka faa'iideysan kara isticmaalka NMN
Dadka qaba cudurka Alzheimers, heerarka NAD si weyn ayey hoos ugu dhacaan. Marka, marka dadka ka cabanaya Alzheimer ay cunaan NMN, jidhku wuu falceliyaa isagoo kordhiya qadarka NAD +, taas oo iyaduna keenta koontaroolka kororka, kordhinta firfircoonida hiddo-wadaha SIRT3, xusuusta oo fiicnaata, iyo dhimista neuroinflammation. Marka, dadka la xanuunsanaya cudurka Alzheimers waxay ka faa'iideysan karaan cunista NMN.
N NMN sidoo kale waxay hagaajineysaa shaqada kilyaha
Kordhinta afka laga qaato ee NMN waxaa lala xiriiriyaa hagaajinta shaqada kelyaha. Tani waa sababta oo ah NMN waxay kordhisaa wax soo saarka NAD + iyo SIRT1, labadaba waxay ku xiran yihiin shaqada kelyaha oo la xoojiyay.
Haddii aad raadineyso inaad iibsato budada Nicotinamide Mononucleotide (NMN) tiro ahaan, meesha ugu fiican ee lagu iibsado budada NMN waa cofttek.com. Cofttek waa shirkad dawooyinka tiknoolajiyad sare leh oo bixisa wax soo saar cusub oo tayo sare leh tan iyo 2008. Shirkadu waxay ku faantaa koox R&D aad u wanaagsan oo leh shaqsiyaad khibrad u leh u heelan horumarinta wax soo saarka tartanka. Cofttek wuxuu leeyahay la-hawlgalayaal wuxuuna alaabtiisa siiyaa shirkadaha dawooyinka ee Shiinaha, Yurub, Hindiya, iyo Waqooyiga Ameerika. Daawada 'Nic-Nicotinamide Mononucleotide' ee ay bixiso shirkadda Cofttek waa mid aad u tayo sareysa isla markaana gebi ahaanba badbaado u leh isticmaalka aadanaha. Muhiimad ahaan, shirkaddu waxay budadan ku siisaa tiro badan, tusaale ahaan cutubyo 25kgs ah. Sidaas darteed, haddii aad fiirineyso budadan ku iibso jumlad, Cofttek waa shirkadda ay tahay inaad la xiriirto - iyagu waa kuwa ugu fiican ee iibiya budada Nicotinamide Mononucleotide (NMN) suuqa.
(1). Yao, Z., et al. (2017). Nicotinamide Mononucleotide wuxuu joojiyaa firfircoonida JNK si looga hortago Cudurka Alzheimer.
(2). Yoshino, J., iyo al. (2011). Nicotinamide Mononucleotide, Key Key NAD (+) Dhexdhexaad, Wuxuu daaweeyaa Pathophysiology ee Cuntada iyo Cudurka Sonkorowga Da'da Yar ee Jiirka. Dheef-shiid kiimikaad.
(3). Yamamoto, T., et al. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, oo ah dhexdhexaad NAD + Synthesis, wuxuu Qalbiga ka ilaaliyaa Ischemia iyo Reperfusion.
(4). Wang, Y., et al. (2018). NAD + Kordhintu waxay caadi ka dhigeysaa astaamaha Alzheimers-ka muhiimka ah iyo Jawaabaha Waxyeellada DNA-ga ee Qaabka Mouse-ka Cusub ee Dhiirrigelinta Dayactirka DNA.
(5). Keisuke, O., et al. (2019). Saamaynta Is-beddelka NAD-da ee Is-beddelka ee Dhibaatooyinka Dheef-shiid kiimikaadka. Joornaalka Sayniska Biyomediga.
(6). Safarka si loo sahamiyo eg.
(7). Oleoylethanolamide (oea) - usha sixirka ee noloshaada.
(8). Anandamide vs cbd: kee baa caafimaadkaaga ugu fiican? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga!
(9). Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan nicotinamide riboside chloride.
(10). Magnesium l-threonate supplements: faa'iidooyinka, qiyaasta, iyo waxyeelooyinka.
(11). Palmitoylethanolamide (digir): faa'iidooyinka, qiyaasta, isticmaalka, kaabista.
(12). 6 faa iidooyinka caafimaad ee ugu wanaagsan ee supveverol supplements.
(13). 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada fosfatidylserine (ps).
(14). 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada pyrroloquinoline quinone (pqq).
(15). Kaabista nootropic ee ugu fiican alfa gpc.
Maamule & Aasaasihii
Hadda i soo gaadh
Waxaan u maleynayaa in NMN ay wax badan ka waxtar badan tahay nicotinamide riboside (NR), maadaama ay wax badan ka soo nuugi karto xiidmaha yar.
Faallooyinka Maskaxda ee GeeHii
Dadku guud ahaan waa inay helaan qiyaasta saxda ah ee kaabista jirkooda, badiyaa meel u dhexeysa 250mg iyo 1g. Da'daada aad tahay, inta badan waxaad ka faa'iideysan kartaa sida caadiga ah.
Ha ku darin kaliya Nicotinamide (NAM). Xaqiiqdii waxay sameysaa dhabarka waxa aad rabto. Haddii aad jidhkaaga siiso NAM waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada NAD +.
Xulo midkood NR ama NMN. Sidoo kale, ha isku dayin inaad ka iibsato alaab qiimo jaban oo ka baxsan Alibaba ama wax kale. Hore ayaa loo cadeeyay in waxyaalahaas badankood ay yihiin been abuur lagana yaabo inay dhab ahaan wax kuu yeelaan.
Markii la qaato kahor intaanad qabin kansarka, heerarka sare ee NAD + waa inay yareeyaan halista isbedelka DNA iyo isku soo ururinta unugyada dareemayaasha, arinta kaliya ee dhabta ah ayaa ah qaadashada NAD + xoojinta halka hada kansarku hayo, maadaama ay dardar galin karto horumarka burooyinka NAD + ku tiirsan maadaama ay isticmaalayaan NAD + sida unugyada caadiga ahi sameeyaan, waana sababta ay u wanaagsan tahay in lala socdo tirinta unugyada dhiigga cadcad dhawrkii biloodba mar. Haddii aadan qabin kansar, waa inay ka hortagtaa.
Ma la hadli karo mitokondria, laakiin sanad iyo badh ka dib markaan qaato nmn (sublingual) waxaad u baahan tahay inaad ka soo saarto gacmahayga qabow ee dhintay.
Tamar badan (keydka tamarta, oo aan dareemin fiilooyin), soo kabasho dhaqso ah oo jimicsi iyo walaac leh, hurdo fiican, xitaa waxay dhistay xoogaa muruq ah markii ugu horeysay noloshayda.
Subnualual NMN at 1g wuxuu i siiyaa kobcin tamar oo xusid mudan. Isla markiiba waan ogaadaa. Aragtidaydu sidoo kale way is beddelaysaa (fiiqanaysaa). Sidoo kale, kalluunka lafaha ayaa soo noqday xilligii. ;-)
David Sinclair wuxuu soo jeediyay in jiirka xeeladaha kala-goysyada ah ee isdabajooga ah ay leeyihiin cimriga ugu dheer taasina macno ayey ila leedahay
macluumaad qiimo leh.
Dadku guud ahaan waa inay helaan tirada saxda ah ee kaabista jirkaaga, badiyaa inta udhaxeysa 250mg iyo 1g.
Da'daada aad tahay, inta badan waxaad ka faa'iideysan kartaa sida caadiga ah.
Ku sii jir muddada dheer. Waxaan dareemay nabarro duug ah oo sii lumay, boorsooyin ka yar indhahayga hoostooda, iyo isbeddel weyn oo xagga dheef-shiid kiimikaadka ah. In yar oo ka mid ah hangout waa wax sidoo kale.
Mahadsanid, waan ku faraxsanahay inaan arko maqaal wanaagsan oo qosol badan.